Sababta Farmaajo u rabin inay gacantiisa ka baxdo NISA | KEYDMEDIA ONLINE
Sababta Farmaajo u rabin inay gacantiisa ka baxdo NISA
Farmaajo ayaa diiday qodobada qaar inuu ka tanaasulo, sida in Bashiir Goobe uu xilka taliyaha NISA sii hayo inta laga heshiinayo magacaabista cusub.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxa aad u adkaatay in heshiis la dhex-dhigo Farmaajo iyo Rooble, oo khilaafkooda cirka isku dhareeray, islamarkaana ay diidan yahiin qodobo ay miiska soo saareen.
Farmaajo ayaa waxuu ku dhegan yahay hogaanka NISA in isaga loo daayo magacaabista cida noqonaysa taliyaha cusub, halka uu sidoo kale dalbanayo in Wasiirka Amniga laga bedelo C/llaahi Maxamed Nuur, oo mucaarad ku ah.
Waan-waanta waxaa kusoo biiray wasiirro matelaya Rooble iyo la-taliyeyaal sare oo xafiiska Farmaajo ka socda, waxaana la isku mari la'yahay hogaanka NISA, Wasiirka Amniga iyo Cadaaladda Ikraan Tahliil.
Farmaajo ayaa sheegay in Bashiir Goobe iyo C/llaahi Maxamed Nuur u ogol yahay Rooble inuu xilal kale u magacaabo, balse meesha hadda ay joogaan laga qaado, taasoo wararku ay sheegayaan in isfaham ka jiro.
Kooxda dhex-dhexaadinta oo hormuud u yihiin Qoor-Qoor iyo Mursal, ayaa la sheegay inay cadaadiska ugu badan saarayaan dhinaca Rooble, kadib markii Farmaajo uu diiday tanaasul.
Rooble ayaa iska ka goos-adeygaya inuu Kiiska Ikraan Tahliil noqdo hal bacaad lagu lisay, maadaama hadii Farmaajo NISA hogaankeeda loo daayo ay meesha ka baxayso in la helo cadeymo iyo xog ku aadan cida dishay Gabadha, oo gudaha Nabad Sugida lagu shirqoolay.
Farmaajo waxaa ka go'an in Fahad aan maxkamad lasoo taagin, iyo in NISA aysan gacantiisa ka bixin, maadaama ay hay'addan hayso macluumaad badan oo xasaasi ah, oo isaga dhaawacayso dib u doorashadiisa, sida macluumaadka dhalinyaradii loo qaadey Eritrea, ee la geliyay dagaalka Itoobiya.